Saturday January 25, 2020 - 11:49:56 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maxkamad islaami ah oo taabacsan Xarakada Al Shabaab ayaa xukun ku ridday laba ruux foo al zina ah ku dhacay iyagoo aan wax guur ah horay usoo marin.
sawir hore xukun tacsiir ah
Fagaara weyn oo ku yaala degmada Jilib ee gobalka Jubbada Hoose waxaa ka dhacay Xad ka mid ah Xuduuda Alle kaasi oo ay fulisay maxkamada Shareecada Islaamka ee Wilaayadaasi.
Xukunkan oo ah Xaddu Zinah waxaa lagu fuliyay Ibraahim Maxamuud iyo Xaawo Cabdu Qaadir oo iska Zinaystay kadibna ka qirtay maxkamadda islaamiga ah horteeda, labadan ruux ee Zinada ku dhacay ayaa lagasoo qabtay banaanka Jilib waxaana la horgeeyay maxkamadda.
Qaadiga Maxkamadda islaamiga ah ayaa goobta fagaara ah ka akhriyay xukunkan iyo maraajicda loo cuksaday, gabadha iyo wiilka Zinada ku dhacay ayaa mid walba lagu dhuftay 100 Jeydan waxaana la amray in muddo sanada ah laga masaarufiyo goobta ay xummaanta ku sameeyeen.
Gobollo dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya oo ay kajiraan maamullo Isaami ah ayaa lagu tadbiiqiyaa ku dhaqanka shareecada Islaamka taas oo sababtay in dadku ay helaan ammaan ayna yaraadaan falalka anshax xumada ah.